You can now get a Chinese Covid-19 vaccine in Zimbabwe, for R1,400 - The Zimbabwean
The private HealthPoint Hospital says it is authorised to offer vaccine tourism, and has "substantial" stock of mostly Chinese vaccines agains the coronavirus.
With Zimbabwe’s vaccine drive going well, it has been authorised by the government to sell doses to foreigners, the hospital says.
Zimbabwe’s President Emmerson Mnangagwa has been resolute that foreigners will be offered vaccines once citizens are sufficiently served, despite civil society concerns about the plan.
The company was authorised by the Zimbabwean government to offer the service to foreigners at a price premium (locals pay $40 instead) as Zimbabwe’s own vaccine rollout is going well, it says.
It has a “substantial number of vaccine doses” available, it says, and no booking is required.
Civil society organisations have expressed concerns around vaccine tourism, including that it would allow rich foreigners to be prioritised over Zimbabweans. But Zimbabwe’s President Emmerson Mnangagwa has for months held that the country would not deny visitors vaccines, on humanitarian grounds, while the important tourism sector has pinned its hopes on a revival in arrivals soon.